Ikhaya leholide lasemaphandleni elinegadi enkulu - I-Airbnb
Ikhaya leholide lasemaphandleni elinegadi enkulu
Brynica Mokra, Świętokrzyskie, Poland
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAgata
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAgata iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Brynica Mokra yidolophana elula (ngokoqobo!), Ubomi obulula kunye nendlela enhle yokubaleka kwisiphithiphithi sesixeko. Ejikelezwe yimithi kuphela, iintaka eziculayo, iqhude lommelwane kusasa kwaye ngamanye amaxesha inkomo iya kukhumbula ngokwayo, kodwa inqabile. Konke kukwindawo emangalisayo emangalisayo kwaye engaqhelekanga, kodwa indawo enika umdla. I-cottage ekhethekileyo emaphandleni enegadi enkulu kufuphi namasimi kunye namahlathi, ejikelezwe yindalo, egcwele uhlaza.
Ngoku umbuzo wokuqala - ukwenza ntoni kwindawo enjalo?
Impendulo elula kakhulu-yonqena, lala egadini kwisitulo esinedekhi, utye isidlo sakusasa eside kwitafile ebekwe kakuhle, emva koko utye ukutya okutyayo okuyosiweyo. Xa wonke umntu enexesha lokutya kunye nokungqengqa, eyona ndlela ifanelekileyo kukujonga ukuba amathambo asenako na ukushukuma nokutsiba kwitrampoline, okanye athumele abantwana apho ukuba babe nento yokwenza kwasekuqaleni. Ngokukhawuleza ukuba ukufudumala kwehlabathi kuqala ukuzikhumbuza kwakhona, i-pool yokubhukuda enhle iya kuhlangula, eya kuncedisa kuphela inqanaba lokuphumla. Kubantu abakhutheleyo, sicebisa ukubaleka ngeendlela ezimdaka okanye uhambo ngebhayisekile ukujikeleza indawo. Kulungile, kodwa emva kweentsuku ezintathu, umnqweno wokutshintsha oku kulula kakhulu kunye nokuphumla okumnandi kunokuqala ukuhluma. Emva koko kufika ingcinga, kwaye ukuba ufuna ukwenza into entloko yakho, kwakhona - eNagłowice, isixeko apho imbongi ebalaseleyo yasePoland - uMikołaj Rej, ufika, unokutyelela i-manor yakhe kwaye wongeze ukuba oku kuphumla kwakungeyona into engento nje, kodwa uhambo egameni art (ungafumana iingongoma engaphezulu ngokuxelela abahlobo bakho), ukuba ufuna, ungaqhubeka uhambo lwakho ecaleni Swietokrzyskie indima boncwadi.
Kwelinye icala sineJędrzejów kunye nenye yee-abbeys ezindala zaseCistercian ezine-monastery endala kakhulu (intle kakhulu), kwaye ukuba oko akwanelanga, ungandwendwela imyuziyam yewotshi (ilungile kakhulu) okanye uhambe kancinci kwaye uye eTokarnia. - imyuziyam le lali Kielce, ixesha ngenene wayeka kukho - awukwazi ukuhlawula nge ikhadi yokutyela (lowo mhlawumbi ubungqina ngokwaneleyo).
Kwaye ekugqibeleni, yintoni ekufuneka ibe kwindawo yokuqala - uhambo "ukunyuka intaba", vele uphume ngesango, ujike iimitha ezimbalwa ukuya ngasekunene kwaye uya kubona indlela eya kwihlabathi elimangalisayo lehlathi, apho yonke into inakho. kulindela kuwe, yaye detox eziphathekayo ukuze ukuphazamisa ixhama, kuba kakhulu ngokuvakalayo nomvundla, nangona oku akuzukuba ndixhathisa ukuhlola mda imimandla emathafeni.
Ukuba ubucinga ukuba abantwana bangenza ntoni kwindawo enje, impendulo iselula – ezilalini, abantwana abadikwa, buza nje nabani na okhulele ezilalini, ngakumbi xa enethoyi ezifana neswimming pool okanye. I-trampoline, yiba wodwa kule mihla uthande iinkomo okanye eminye imizekelo yasemaphandleni!
Umbuki zindwendwe ngu- Agata
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Polski